जिका भाइरस के हो ? भारतमा सन् २०१६/१७ मा पहिलोपटक जिका भाइरसका संक्रमित देखिएका थिए - bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > जिका भाइरस के हो ? भारतमा सन् २०१६/१७ मा पहिलोपटक जिका भाइरसका संक्रमित देखिएका थिए
जिका भाइरस के हो ? भारतमा सन् २०१६/१७ मा पहिलोपटक जिका भाइरसका संक्रमित देखिएका थिए
२६ असार २०७८, शनिबार ०५:१६ bampijhyala
२६ असार, बाँपीझ्याला, काठमाडौं । भारतको केरला राज्यमा जीका भाइरसका १४ संक्रमित फेला परेसँगै त्यहाँको सरकारले सतर्कता बढाएको छ । केरलाकी स्वास्थ्यमन्त्री विना जर्जले तिरुअनन्तपुरम जिल्लामा जिका भाइरसका संक्रमित फेला परेको पुष्टि गरेकी हुन् । विनाले भनेकी छिन्, ‘राज्यको सबै स्वास्थ्य निकायलाई सतर्क गराइएको छ । सबै जिल्लाको मेडिकल अधिकारीलाई पनि विशेष गरी गर्भवती महिलाको ख्याल गर्न भनिएको छ । ‘हामी लगातार अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
हामीले पुनेस्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीलाई नमुना संकलन गरेर पठाइरहेका छौं । चिन्ता गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन । हामीले राज्यभर परीक्षण र निगरानी बढाएका छौं’ उनले भनेकी छन् । भारतमा सन् २०१६–१७ मा पहिलोपटक जिका भाइरसका संक्रमित देखिएका थिए । त्यतिबेला गुजरातमा यो भाइरसका संक्रमित फेला परेका थिए ।
सन् १९४७ मा युगाण्डाको जीका जंगलका बाँदरमा पहिलोपटक यो भाइरस देखिएको थियो । तर, सन् १९५२ मा यसलाई औपचारिक रुपमा एक विशेष किसिमको भाइरस मानिएको थियो । यद्यपि शोधकर्ताहरुका अनुसार भारतमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु संक्रमित भएका थिए । किनकि १९६ जनामा परीक्षण गर्दा ३३ जना मानिसमा यो भाइरसविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता विकास भइसकेको पाइएको थियो । यी शोधकर्ताहरुले जिका भाइरसले भारतमा पनि मानिसहरुलाई संक्रमित बनाइरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
यो भाइरस विशेषगरी लामखुट्टेबाट फैलिने गरेको छ । यद्यपि यौन सम्बन्धबाट पनि यो भाइरस सर्न सक्छ । यो भाइरसको कारण बालबालिकाको मष्तिस्कको विकास हुन पाउँदैन । धेरै संक्रमितको कम विकसित मष्तिस्क भएको बच्चा जन्मिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले सन् २०१६ मा जिका भइरसलाई विश्व स्वास्थ्य आपतकाल भएको बताएको थियो ।
जीका भाइरसको संक्रमणका लक्षणहरु
यो भाइरसको संक्रमण भएका मानिसको मृत्युदर निकै कम छ । पाँच संक्रमितमध्ये एकजनामा यसको निम्न लक्षण देखिन्छ –
आँखा रातो हुने वा सुन्निने
अत्यधिक जीउ दुख्ने
शरीरमा बिमिराहरु देखिने
अहिलेसम्म यो भाइरसको लागि कुनै पनि खोप र औषधि उपलब्ध छैन त्यसैले बिरामीलाई आराम गर्ने र धेरैभन्दा धेरै तरल पदार्थ खाने सल्लाह दिइन्छ ।
सबैभन्दा चिन्ताको कुरा यसको असर गर्भमा बढिरहेको बच्चालाई पर्छ । यस्तो अवस्थामा कम विकसित मष्तिस्क भएको बच्चा जन्मिन्छ । यसलाई माइक्रोसेफली भनिन्छ ।
के हो माइक्रोसेफली ?
जब बच्चा जन्मिँदा उसको मष्तिस्क कम विकसित र असामान्य हन्छ, त्यसलाई माइक्रोसेफली भनिन्छ । यो अवस्थामा मष्तिस्क राम्रोसँग विकसित हुन पाएको हुँदैन । यसको गम्भीरता कम वा धेरै हुन सक्छ ।
यद्यपि मष्तिस्क कहिलेकाहीँ पूर्ण रुपमा विकसित नभएको कारण जीवनको प्रमुख कार्यलाई पनि नियन्त्रित गर्न सक्दैन । जुन निकै घातक हुन सक्छ ।
यो भाइरसबाट संक्रमित भएका बच्चाको मष्तिस्कले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र उसको विकास पनि सही समयमा हुन सक्दैन ।
यस्तो अवस्था रुबेला, गर्भावस्थाको समयमा नशा सेवा गर्ने वा वंशाणुगत असामान्यताजस्ता संक्रमणको कारण पनि हुन सक्छ । डब्ल्यूएचओका अनुसार वैज्ञानिकले जिका भाइरसको कारण माइक्रोसेफलीका साथै गिलेन बेरे सिन्ड्रोम पनि हुन सक्ने बताएका छन् । यो संक्रमणको कारण एक विशेष किसिमको समस्या देखिन्छ । यसलाई गिलेन बेरे सिन्ड्रोम भनिन्छ । यसको कारण अस्थायी पक्षघात हुन सक्छ ।
गर्भावस्थामा केही बच्चाको मृत्यु भएपछिको अध्ययनमा बच्चाको मष्तिस्कमा यो भाइरस पाइएको थियो । भाइरस फैलिन सक्ने अवस्थामा सरकारले महिलालाई गर्भवती नहुन सल्लाह दिने गरेको छ । विशेषज्ञले जिका भाइरसको सम्बन्ध गर्भावस्थाको धेरै जटिलतासँग पनि जोडिएको हुन सक्ने बताएका छन् । जसमा गर्भपतन, मरेको बच्चा जन्मिनु, समयभन्दा पहिला बच्चा जन्मिनु र आँखाको समस्याजस्ता कारण हुन सक्छन् ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)का अनुसार जिका भाइरस रगतमा एक सातासम्म रहन्छ र यौन सम्बन्ध राख्दा पनि सर्न सक्छ ।
सीडीसीका अनुसार यदि संक्रमण मुक्त भइसकेपछि गर्भाधारण हुने हो भने बच्चामा यसको संक्रमण देखिँदैन ।
सन् २०१६ मा डब्ल्यूएचओले जिका भाइरस प्रभावित क्षेत्रमा बस्ने र त्यहाँबाट आउने जोडीलाई आठ सातासम्म सुरक्षित यौन सम्बन्ध मात्र राख्न सुझाव दिएको थियो ।
पुरुषलाई जिका संक्रमण भएको भए ६ महिनासम्म उसलाई यौन सम्बन्ध नराख्न वा सुरक्षित यौन सम्बन्ध मात्र राख्न सुझाव दिइन्छ ।
कहाँबाट आयो जिका भाइरस ?
जिका भाइरसको सन् १९४७ मा पहिलोपटक युगाण्डामा बाँदरमा फेला परेको थियो । सन् १९५४ मा नाइजेरियामा पहिलोपटक मानिसमा यो संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त द्वीप क्षेत्रमा यो संक्रमण देखिएको थियो ।
पहिला जिकाको संक्रमणको स्तर निकै कम थियो र यसबाट मानिसको जीवनमा कुनै खतरा नरहेको मानिएको थियो । यद्यपि सन् २०१५ मा ब्राजिलमा जिका भाइरसका संक्रमित फेला परेका थिए र त्यसपछि तीव्र गतिमा निरन्तर यसको संक्रमण फैलिएको थियो ।
कसरी फैलिन्छ संक्रमण ?
यो एडिस लामखुट्टेबाट सर्छ । यो लामखुट्टेको कारण डेंगु र चिकनगुनियाजस्ता रोग पनि फैलिन्छ । क्यानडा र चिलीलाई छाडेर पूरा अमेरिका महादेशमा यो लामखुट्टे पाइन्छ । त्यसका साथै एसियामा पनि यो लामखुट्टे पाइन्छ ।
यद्यपि औलो फैलाउने लामखुट्टेभन्दा फरक यो लामखुट्टे दिउँसो धेरै सक्रिय हुन्छ । यदि यो लामखुट्टेले संक्रमित व्यक्तिलाई टोक्यो भने यसले अन्य धेरै मानिसलाई पनि संक्रमित बनाउने सम्भावना हुन्छ ।
संक्रमण निको हुन कति समय लाग्छ ?
अहिलेसम्मको प्रमाणलाई हेर्ने हो भने यो संक्रमण एक सातासम्म रहन्छ । यद्यपि मानिसको वीर्यमा भने यो भाइरस दुई सातासम्म रहन सक्छ । संक्रमणबाट प्रभावित धेरै मुलुकमा यसअघि नै सुरक्षित रुपमा मात्र यौन सम्बन्ध राख्न र एक महिनासम्म रक्तदान नगर्न सल्लाह दिइएको थियो ।
अहिलेसम्म यसको कुनै उपचार उपलब्ध छै्रन । त्यसैले यसको एकमात्र उपाय भनेको लामखुट्टेबाट बच्नु नै हो । स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको सुझाव अनुसार
इन्सेक्ट रेपेलेन्ट्सको प्रयोग गरौं
लामो बाहुला भएको कपडा लगाऔं
झ्याल ढोका बन्द राखौं
घरनजिकै पानी जम्मा हुन नदिऔं
अन्तराष्ट्रीय राजनैतिक बिश्लेषण
अमेरिकाले १५ लाख नेपालीलाई खोप दिने घोषणा
हजुरको आजको दिन, २०७८ असार २६ गते, शनिवार, १० जुलाई २०२१
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि २६ असार २०७८, शनिबार ०५:१६
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स २६ असार २०७८, शनिबार ०५:१६
लघुकथा–पढ्ने रहर २६ असार २०७८, शनिबार ०५:१६
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल २६ असार २०७८, शनिबार ०५:१६
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला २६ असार २०७८, शनिबार ०५:१६